Hot Kupisa-Kutsika Vagadziri & Vatengesi - China Hot Mapepa-Ekutsika Fekitori
GW Mapepa Anocheka
A4copy Pepa Kugadzira Line
Nhatu Knife Trimmer
Pepa Bhegi Machine
Hwindo Rinokanda Muchina
Otomatiki Vertical Laminating Machine
Otomatiki Kutsemura Muchina
Yakazara otomatiki Firimu Laminating Machine
Kugadzira / R & D.
Email / Nharembozha
We adopts yemhando kugadzirwa mhinduro uye 5S utariri mureza. kubva kuR & D, kutenga, kugadzira, kusangana uye kutonga kwemhando yepamusoro, maitiro ese anotevedzera mwero. Nemaitiro akaomarara ekudzoreredza mhando, muchina wega wega mufekitori unofanirwa kupfuudza cheki dzakaomesesa dzakagadzirirwa mumwe neumwe mutengi ane hukama ane kodzero yekunakidzwa nebasa rakasarudzika.
GUOWANG C80Y CHINOGONESESA HOT -...
GUOWANG C106Q ANOGONA KUFA ...
GW PRECISION mapatya banga banga ...
GW PRECISION SHEET CUTTER S ...
GUOWANG T-1060BF KUFA-CUTTIN ...
Guowang otomatiki Hot angazvidzvisa-tsikwa Machine
20 yekupisa nzvimbo *
5000 ~ 6500Mashizha / H
Max.320 ~ 550T kumanikidza
Yakajairwa 3 Longitudinal, 2 Transversal foil shaft
Otomatiki kukarukuretwa kwemapuratifomu neakachenjera komputa
GUOWANG C-106Y KUFA-KUCHENGA UYE FOI KUTSIKIRA MACHINE QuotATION LIST
Pombi yepombi inobva kuGerman Becker.
Lateral murwi unogona kugadziridzwa nemota kune chaiyo jira yekupa.
Pre-achiunganidzira chishandiso chinoita isinga-mira kudyisa ine yakakwira murwi (Max. Murwi kukwirira kunosvika kusvika 1600mm).
Makara akakwana anokwanisa kuumbwa pamapallet anomhanya pane njanji dze pre-piling. Izvi zvinopa mupiro wakakosha mukugadzirwa kwakatsetseka uye rega opareta afambise murwi wakagadzirirwa kunodyisa nenzira kwayo uye zviri nyore.
Imwe nzvimbo chinzvimbo pneumatic yakavhiyiwa mechiki batira inodzivirira iyo yekutanga jira mushure mekutanga kwese-kutanga kwemuchina inogara ichidyiswa kumberi kunoteedzera nyore, nguva-yekuchengetedza uye yekuchengetedza-zvinhu-yekugadzirira.
Iwo mativi akagadzika anogona kuchinjika akananga pakati pekudhonza uye Push mode pamativi ese emuchina nekungochinja bhaudhi pasina kuwedzera kana kubvisa zvikamu. Izvi zvinopa mukana wekugadzirisa zvinhu zvakasiyana-siyana: zvisinei kuti mamaki ekunyoresa ari kuruboshwe kana kurudyi kwesheet.
GUOWANG C80Y ZVINOGONESESA HOT-FOIL KUTSIKIRA MACHINE
Yemhando yepamusoro feeder yakaitwa muChina ine mana masucker ekusimudza bepa uye mana maswiti ekuendesa mberi mapepa anoona yakatsiga uye inokurumidza kudyisa mapepa. Iyo kukwirira uye kona yemasuck inogadziriswa nyore nyore kuti achengetedze machira akanyatsotwasuka.
Mechanical maviri-pepa detector, jira-rinodzora chishandiso, inogadziriswa mweya inovhuvhuta ita chokwadi chemashizha kuendesa kutafura yebhandi zvakadzikama uye chaizvo.
GUOWANG R130Y ZVINOGONESESA HOT-FOIL KUTSIKIRA MACHINE
Padivi nepamberi pekugadzika zvine chaiyo yekuona maseru, ayo anogona kuona rakasviba ruvara nepurasitiki jira. Iko kunzwisisika kunogadziriswa.
Optical sensors ine otomatiki yekumira system patafura yekugonesa inoita kuti iwe ugone kugadzirisa system yekutarisa- ye yakazara mhando kudzora pamusoro pese pepa upamhi uye pepa jam.
Kushanda kwepaneru yekudyisa chikamu kuri nyore kudzora iko kudyisa maitiro ne LED kuratidza.
Zviparadzanisa zvekutyaira zvemurwi mukuru uye murwi webetsero
PLC uye yemagetsi cam yekutonga nguva
Anti-chipingamupinyi mudziyo anogona kudzivisa muchina kukuvara.
Japan Nitta inoratidzira bhandi kune feeder uye iyo yekumhanyisa inochinjika
pamusoro pedu kutengesa network tibata isu mabasa